ISIGABA SEMARVEL 4, KUBANDAKANYA IMIHLA YOKUKHUTSHWA KWEMUVI ENTSHA KUNYE NEENDABA ZECAST, ZAMVA NJE [UHLAZIYO] KUNYE NEETHIYORI - IIMUVI
Isigaba seMarvel 4 siguquke kakhulu. Kukho ukulibaziseka, i-odolo entsha ngokupheleleyo yokukhumbula ngentloko, kunye nee-teasers
Isigaba seMarvel 4 uguqukile kakhulu. Kukho ukulibaziseka, umyalelo omtsha ngokupheleleyo wokukhumbula ngekhanda, kunye neetayers kunye nokuseta iifoto kubo bonke abangenayo.
Ngelixa isigaba sesi-4 siqhubeka nokutyhalelwa umva, kukho izizathu zokuba nemincili ngesiqendu esilandelayo se-MCU. Ngokungathandabuzekiyo usiya kumabonwakude, enye into, kunye neDisney + ngoku elikhaya kuthotho olunamanqatha olupheleleyo lweMarvel ekufuneka ikhuphisane nezinto ezithandwayo yiMandalorian kwiziko lokusasaza.
Kwaye, kukho abantu abatsha abafikayo kwi-MCU njengenxalenye yeSigaba 4: iShang-Chi, i -Eternals, kunye nomhlolokazi omnyama osandula ukubakho. Phosa i-Spidey kathathu, kunye nemikhombandlela emitsha eyahlukileyo yeTro kunye noGqirha Strange kwaye ujonge esona sigaba sihle, esona sibhongo.
Ngaba ufuna ukuyifumana yonke loo nto? Konke kulapha kwisikhokelo sethu esipheleleyo seNqanaba lesi-4 seMarvel- ukusuka kwiifilimu, kumabonwakude, nakwinto ejonge ngaphaya kwe-2022.
Uhlaziyo lwamva nje kwiSigaba seMarvel 4
Kubonakala ngathi iMarvel ukuza kuthi ga ngoku yeyona inomdla kwaye Isigaba esimangalisayo seMCU . Akunyanzelekanga ukuba uwathembe la magama, hlala uqhagamshele kude kube sekupheleni, kwaye uya kuvuma ngokwakho kwaye uninzi lwethu sele luvumile ngeNgxelo ekhankanywe apha ngasentla. Ke makhe siqale ngayo !!
Yintoni onokuyilindela kwiSigaba 4 seMCU?
Isigaba 4 seMCU asishiyi thuba lokusothusa. Kubonakala ngathi iMarvel inezinto ezininzi ezicwangcisiweyo kule minyaka izayo. Ngaphandle kweemovie ezininzi ze-MCU eziphuma rhoqo ngonyaka, ngoku kuza kwiDisney +. Ngokwenene! Abaphulaphuli banexesha elimangalisayo ngeSigaba 4 seMCU.
Kwabhengezwa kwinyanga ephelileyo ukuba isigcawu sibuyele kwakhona sonke.
Makhe sifumane ukuba yintoni ukufika njengenxalenye yeMarvel phase 4.
Makhe sihlolisise umhla wokukhutshwa kweMigangatho emi-4 yeMarvel
I-Shang-Chi: Kwaye iNqaku leeRingi eziShumi (ngoFebruwari 12, 2021)
Umboniso bhanyabhanya omnyama womhlolokazi (ngoMeyi 1, 2020)
I-Falcon kunye nejoni lasebusika (phakathi ku-2020)
Umbono weWandaVision (phakathi ku-2020
Ezingunaphakade (Novemba 6, 2020)
Umboniso weLoki weTV (Intwasahlobo 2021)
Ugqirha Strange kwi-Multiverse of Madness (ngoMeyi 7, 2021)
Ungathini ukuba…? (NgeNtwasahlobo 2021)
Spider-Man 3 (Julayi 26, 2021)
Thor: Uthando kunye neNdudumo (Novemba 6, 2021)
Uthotho lweHawkeye (Ukuwa 2021)
Kwaye okuninzi ngakumbi kwindlela yabalandeli kunye nabaphulaphuli.
Kwaye isibhengezo esimangazayo kuthotho lweBlade TV. Sifumana ukubona uMahershala Ali njengomhambi wendlela kuyo. Okwangoku, akukho mntu unoluvo okanye naluphi na ulwazi malunga nalo. Umhla wokukhutshwa kweBlade awusemthethweni okwangoku.
Oko konke okwangoku.
Ke ngalo lonke olu lwazi, kuninzi abalandeli abanokuyonwabela. Qiniseka ukuba ujonga uhlaziyo ngakumbi kwiSigaba seMarvel 4.
Njengokuba kukho ulwazi oluthe kratya oza kuza kwaye xa izinto ziqala ukukhawulezisa ukuya phambili emva kwesifo sehlabathi.
Ukuza kuthi ga ngoku ubambe nje ibhakethi elikhulu lepopcorn onokuthi uhlale kulo, uhlale phantsi kwaye uphumle. I-2021 ayikho kude kangako, sele sinonyaka.
Ndiyathemba ukuba ngo-2021 xa zonke iifilimu esizithandayo ezilindelweyo ziphuma, siyakuhlala kunye nabahlobo bethu, ngaphandle kwemaski yesini kwaye sithethe malunga nexesha esasisekhaya kulo nyaka.
Eyona midlalo mihle yosapho loluntu
ngomhla webhloko 4 wokukhutshwa komhla
sithini esona siqendu sihlekisayo somfo wosapho
amarhamncwa amatsha emidlalo bhanyabhanya kunye nalapho unokufumana khona